Guyyoota 100: Gabaa gurraacha irratti gatiin doolaaraa maaliif gadi cabe? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, BBC and Getty Images
Torban tokkoon dura doolaarri tokko gabaa gurraacha irratti birrii 36'n sharafamaa kan ture, amma gara birrii 31'tti gadi cabeera.
Guyyoota torba keessatti birri shaniin gadi cabuun kan hin baramneedha. kun maaliif ta'ee?
Sharafni doolaaraa gabaa gurraachaa to'annaa mootummaan ala fedhii gabaan waan gaggeeffamuuf haala diinagdeen biyya tokkoo keessa jiru madaaluuf mala wayyaa'aafi amanama godhamee fudhatama.
Akka tasaa sharafni doolaaraa hiri'isuu ilaalchisee BBC'n oggeessoota dinagdee mari'achiiseerra.
'To'annaan daangaa cimuu natti fakkaata'
Sharafnii ol ka'uu fi gadi cabuun, akkasumaan lafaa ka'ee kan dhalatu miti.
Gabaan sharafa alaa wayita wanti tokko dhalatu kan bir'atuu waan ta'eef gabaa rifataadha jedhama.
Dr. Abiy aangoorra erga bahanii waantoonni gurguddoon dhagaahaman, mul'ataniifi tilmaamaman gabaa doolaaraatti adaba gochuunsanii hin oolle jedhu ogeeyyiin.
MM Dr. Abiy Ahimed sharafa alaa ilaalchisee iftoominaaan yaada isaan diyaaspooraaf dhiheessan, oduun naannoo Somaaleetti boba'aan argamuu, biyyatti keessatti hanga tokko nagaan bu'aa dhufuun taateewwan eeramuu danda'an keessa muraasa.
Doolaarri hanqina qoricha uumee
Gargaarsa ardiin Afrikaa argattu keessaa %10 irra kan caaluu akka jiruun biyyaa baaffama.
Karaa seeraa alaa doolaarri biliyyoonnii hedduun biyyoota keessaa bahan keessaa Itoophiyaan tokkoo.
Tasgabbiin biyyattii keessaa dhibuun walqabatee, namoonni hedduun maallaqa qaban gara doolaarratti jijjiiruun biyya keessaa baasaa akka turan ragaaleen mul'isan jiru.
Samiichaa angaawoota mootummaan rawwataman, MM Dr. Abiy 'hattoota' ittiin jedhan dabalatee gabaan sharafa dhoksaatti godhamu gatiin doolaaraa akka ol ka'u godhee akka ture ogeessi diinagdee Dr. Qosxanxinnoos Barihe ni dubbatu.
"Jarri saamtoonni kun, gaaffii irratti waan kaasisuuf, maallaqa biyyattii birriidhaan gara baankiitti geessanii kaa'uu hin danda'ani. Kanaafuu maallaqa qaban gara doolaaraatti jijjiruun biyyaa basuu filatu," jedhu.
Biyyi bal'inaan wayita saamamtu, lakkoofsi namoota birrisaanii gara doolaaraatti jijjiruu barbaadan ni dabala. Kunimmoo gatii doolaarri gaba dhoksaa keessatti qabu daran ol kaasaa jedhu.
Kontiraaktaroota biyya alaa birriin kaffalamuuf
Gatiin doolaaraa gabaa dhoksaa keessatti dabalaa dhufuuf sababa biroo kan natti fakkaatu jedhu Dr. Qosxaanxiinoos, kubbaaniyoota Chaayinaa ijaarsa gurgguudda gaggeessuuf caal-baasiirratti hirmaatanidha.
Kubaaniyoonni kun kaffaltiin birriin akka godhamuuf waliigalanii biyya seenu. Birriin biliyoonaan lakkaawamu erga kaffalameefii booda birricha doolaaratti jijjirruun biyya keessa baasuu. Bittaa kana ammoo bakka gabaa doolaaraa dhoksaatti raawwatu jedhu.
Torban kana keessa naannoo doolaara mil 1.2 daangaarratti qabamuu fi daangaarratti to'annoon cimuun fedhii gabaa doolaara dhoksaatti godhamu kan hir'ise fakkaataa jedhu.
Pirezidaantiin duraanii mana maree daldala Itoophiyaa obbo Kibuur Gannaa garuu yaada Dr. Qosxanxinnoosiin guutummaatti walii hingalan.
''To'annoon daangaa gatii doolaaraa hin hir'isu hin jedhu. Ta'uus daangaan cufamuun al tokkoon gatii doolaaraa akkanatti gadi cabsa jedhee hin yaadu,'' jedhu.
Kanarra, lakkoofsi namoota qabeenya isaaniif yaadda'anii kan qaban doolaaraatti jijjiraanii ol kaa'anii xiqqaachaa dhufuun sababa ta'uu danda'a jedhu.
''Karaa siyaasaan abdiin wayita argamu, fedhiin birrii dabalaa dhufa.''
Akka obbo Kibuur Gannaatti, siyaasni gadi cabuu sharafa doolaaraa torban kanaaf shoora gudda taphateera.
Gama biraan dhaabbileen sirna gibiraa keessa hin galle gara gabaa doolaaraa dhoksaa deemuu waan dhiisaniif ta'uu mala jedhu.
Gabaan doolaaraa dhoksaa akka bal'atu kannen taasisan keessa tokko namootni maallaqa guddaa mootummaa jalaa hatuun biyyaa baasuuf yommuu yaalanidha.
Amma mootummaan baasiisaa hir'isuun diinagdee biyyaa bilisa gochaa yommuu adeemu haalichi ni jijjirama jedhu.
Daqiiqaa 55 dura